Hawaasi Oromoo Saud Arabia konya Jiddaa keessa jiraatan Guyyaa WBO sirna howwaan kabajatan
(Madda Oduu ABO/MOA/Amajjii 26,2009) Hawaasi Oromoo Saud Arabia konyaa Jiddaa keessa jiraatan Guyyaa WBO fi ayyaana bara haaraa Amajjii 1 sirna howwaan kabajatan.
Tokkummaan hawaasa Oromoo Jiddaa fi miseensotiin Adda Bilissummaa Oromoo konyaa Jiddaa keessa jiraatan guyyaa WBO fi ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun gaafa Amajjii 23,2009 haala miidhagaan kabajatanii milkiin xumuratan.
Sirna ayyaana kanaa irratti hawaasi Oromoo fi degertooti qabsoo bilisummaa Oromoo heddumminaan argamuun haala qabsoo Oromoo fi ABO irratti mariyatanii booda degersa ABOf qabanii fi imaanaa gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii bakkaan gahuuf waadaa isaanii haaromsanii jiru. Kanuma waliin wal qabatee sirna kabajaa ayyaana kanaa irratti gumaacha ykn tinnisa qabsoo bilbilsummaa Oromoof oolu maallaqa guddaa Adda Bilisummaa Oromoof gumaachuu isaanii MOA gabaasa.
Kabajaa ayyaana kanaa irratti haawaasi Oromoo Jiddaa jiraatu kanneen sirna dhablummaan ABO irraa bahanii olola rakashaa qabsoo fi hoggana irratti oofaa jiran gochaa isaanii kana irraa dhaabbatanii akka gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebiʼaniif yaamicha godhanii jiru.